तेस्रो त्रैमासमा बैंकिङ क्षेत्र, अधिकांस परिसूचक सकारात्मक, हेरौं कुन बैंकले कति कमाए र कसको अबस्था कस्तो छ ? - सुनाखरी न्युज
तेस्रो त्रैमासमा बैंकिङ क्षेत्र, अधिकांस परिसूचक सकारात्मक, हेरौं कुन बैंकले कति कमाए र कसको अबस्था कस्तो छ ?
Posted on: May 22, 2020 - 7:13 am
वाणिज्य बैंकहरुले तेस्रो त्रैमासको अबस्था सार्वजनिक गरेका छन् । बैंकहरुका सुचांकमा त्यति फरक परेको देखिँदैन । लकडाउनको अबस्था र कारोबारका मन्दी आएका कारण अधिकाँस बैंकहले नाफा घटाएका छन् । तर अर्को त्रैमासमा भने बैंकहरुको रिपार्ट नकारात्मक आउने संकेत देखिएको छ । हेरौं चैत मसान्तसम्मको बैंकहरुको आम्दानी रिपोर्ट
एन आई सी एशियो बैंकको तेस्रो वित्तीय विवरण अनुसार बैंकले २ अर्ब ५० करोड खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ । यस्तै, बैंकले चालु आ। व। को तेस्रो त्रैमाससम्म वार्षिक विन्दुगत आधारमा १२५ ९ ३८ करोड० ले वृद्धि गरी ३ अर्ब ६० करोड सञ्चालन मुनाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ । यसैगरी खुद मुनाफातर्फ वार्षिक विन्दुगत आधारमा १०५ ९ २६ करोड० को वृद्धि सहित २ अर्ब ५० करोड खुद मुनाफा आर्जन गरेको हो । गत वर्षको सोही अवधीको खुद मुनाफा २ अर्ब २८ करोड रहेको थियो । यस आ।व।को तेस्रो त्रैमाससम्ममा कर्जातर्फ २५ अर्बले वृद्धि गरी १७५ अर्ब र निक्षेप संकलनतर्फ १५ अर्बले वृद्धि गरी १९६ अर्ब पुर्याउन बैंक सफल भएको छ ।
सिभिल बैंकको नाफा तेस्रो त्रैमासमा ३६ करोड ५ लाख रुपैयाँमा सीमित हुन पुगेको छ । बैंकको वितरण योग्य नाफा पनि १९ करोड ७ लाख ३३ हजार रुपैयाँ ऋणात्मक नै रहेको छ । बैंकले ४९ अर्ब ८४ करोड ९९ लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको छ भने १ अर्ब ७० करोड ८९ लाख रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरको छ । बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी ६।१ र प्रतिसेयर नेटवर्थ १ सय २४।६४ रुपैयाँ रहेको छ ।
नेपाल क्रेडिट एण्ड कर्मस ९एनसीसी० बैंकले १ अर्ब १६ करोड ५८ लाख भन्दा बढी नाफा कमाएको छ । बैंकको वितरण योग्य नाफा ३० करोड ५३ लाख २९ हजार छ भने ६६ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन रहेको छ । बैंकको सञ्चालन मुनाफा ६० करोड ६२ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
सिटिजन्स बैंकले १ अर्ब ९ करोड १२ लाख भन्दा बढी नाफा कमाएको छ । बैंकको वितरण योग्य नाफा ४१ करोड ९ लाख ६५ हजार रुपैयाँ रहेको छ । बैंकको खुद ब्याज आम्दानी २ अर्ब २४ करोड ४८ लाख १३ हजार रुपैयाँ रहेको भने सञ्चालन नाफा १ अर्ब ५२ करोड ३१ लाख ४७ हजार रुपैयाँ रहेको छ । बैंकको प्रतिशेयर आम्दानी १६।८७ रुपैयाँ छ भने प्रतिशेयर नेटवर्थ १४५।७७ रुपैयाँ रहेको छ ।
सेञ्चुरी बैंकले यस वर्ष ९१ करोड ५७ लाख भन्दा बढी नाफा आर्जन गरेको छ । बैंकको वितरणयोग्य नाफा १३ करोड ४१ लाख १५ हजार रुपैयाँ रहेको छ भने खुद ब्याज आम्दानी २ अर्ब २५ करोड १५ लाख ८५ हजार भएको छ । यस्तै, बंैकको सञ्चालन मुनाफा १ अर्ब २६ करोड ९२ लाख २८ हजार रुपैयाँ रहेको छ । ५८ अर्ब ७७ करोड ४५ लाख ८१ हजार रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको बैंकको १४.५१ रुपैयाँ प्रतिशेयर आम्दानी छ भने १२९.७२ रुपैयाँ प्रतिशेयर नेटवर्थ रहेको छ । ९ सबैभन्दा बढी प्रतिशेयर आम्दानी सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकको रहेको छ । ०
नेपाल बैंकको त्रैमासको विवरणअनुसार बैंकले १ अर्ब ९९ करोड ६५ लाख भन्दा बढी नाफा कमाएको छ । यस बैंकको वितरणयोग्य नाफा ६ करोड रुपैयाँ बढी ऋणात्मक देखिएको छ छ । बैंकले १ खर्ब २२ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको छ भने ४ अर्ब माथि खुद ब्याज आम्दानी गरेको छ । यस्तै, बैंकको सञ्चालन मुनाफा २ अर्ब ६५ करोड ५ लाख छ भने बैंकको प्रतिशेयर आम्दानी २७.१३ रुपैयाँ र प्रतिशेयर नेटवर्थ २९६।६३ रुपैयाँ रहेको छ ।
कुमारी बैंक लिमिटेडले पनि आफ्नो वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले चालु आ।व। २०७६÷७७ को तेस्रो त्रैमासमा १ अर्ब १ करोड २७ लाख १३ हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । गत वर्ष यस अवधिसम्म बैंकको खुद नाफा १ अर्ब ३२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी थियो । चैत मसान्तसम्म आइपुग्दा बैंकको वितरण योग्य नाफा भने ४ करोड ५० लाख ६१ हजार रुपैयाँमा सीमित भएको छ । यस वर्ष बैंकले ८५ अर्ब ५० करोड ६७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी निक्षेप संकलन गरेको जनाएको छ भने ८९ अर्ब ७० करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेको छ । बैंकको प्रतिशेयर आम्दनी १४ दशमलव १३ रुपैयाँ र प्रतिशेयर नेटवर्थ १३२ दशमलव ६५ रुपैयाँ रहेको छ ।
कृषि विकास बैंकले सार्वजनिक गरेको तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण अनुसार बैंकले यस वर्ष २ अर्ब ४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी नाफा गरेको छ । गत वर्षभन्दा यस वर्ष कम्पनीको नाफा ७ दशमलव ७८ प्रतिशत कम भएको छ । गत वर्ष यसै अवधिमा बैंकको नाफा २ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी थियो । गत वर्षभन्दा यस वर्ष बैंकको सञ्चालन नाफा २.४५ प्रतिशत घटेको छ भने खुद ब्याज आम्दानी पनि १७।७३ प्रतिशतले घटेको छ । चैत मसान्तसम्म आइपुग्दा बैंकको वितरण योग्य नाफा भने १ अर्ब २५ करोड भन्दा बढी रहेको छ । बैंकको प्रतिशेयर आम्दानी २६ दशमलव ५५ रुपैयाँ र प्रतिशेयर नेटवर्थ २३२ दशमलव ११ रुपैयाँ रहेको छ ।
लक्ष्मी बैंकले सार्वजनिक गरेको तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण अनुसार बैंकले यस वर्ष १ अर्ब ८ करोड ९९ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । गत वर्षभन्दा यस वर्ष कम्पनीको नाफा ५ दशमलव ८६ प्रतिशत बढेको छ । गत वर्ष यसै अवधिमा बैंकको नाफा १ अर्ब २ करोड ९६ लाख बढी थियो । गत वर्षभन्दा यस वर्ष बैंकको सञ्चालन नाफा ३।१२ प्रतिशत बढको छ भने खुद ब्याज आम्दानी पनि १८।८६ प्रतिशतले बढेको छ । चैत मसान्तसम्म आइपुग्दा बैंकको वितरण योग्य नाफा भने ४१ करोड रुपैयाँ ऋणात्मक रहेको छ । बैंकको प्रतिशेयर आम्दानी २६ दशमलव ५५ रुपैयाँ र प्रतिशेयर नेटवर्थ २३२ दशमलव ११ रुपैयाँ रहेको छ । चैत मसान्तसम्म बैंकले ९७ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको देखिएको छ भने ९० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ ।
प्रभु बैंकको तेस्रो त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार बैंकले १ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । बैंकको खुद नाफा गत वर्षको यही अवधिसम्मको तुलनामा ०।८२ प्रतिशतले बढेको हो। गत वर्षको यही अवधिमा बैंकले १ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो। चैत मसान्तसम्म आइपुग्दा बैंकको वितरण योग्य नाफा भने ७७ करोड ४९ लाख ८१ हजार रुपैयाँमा सीमित भएको छ । यस वर्ष बैंकले १ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँको बढी निक्षेप संकलन गरेको जनाएको छ भने ९९ अर्ब ३९ करोड बढी कर्जा प्रवाह गरेको छ । बैंकको प्रतिशेयर आम्दनी १९ रुपैयाँ ८९ पैसा र प्रतिशेयर नेटवर्थ १५१ रुपैयाँ ६९ पैसा रहेको छ ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडले चालु आ।व। २०७६र७७ को तेस्रो त्रैमाससम्ममा करिब ७ अर्ब खुद ब्याज आम्दानी गरेको जनाएको छ । बैंकको तेस्रो त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार बैंकले ३ अर्ब ३ करोड ६२ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । बैंकको खुद नाफा गत वर्षको यही अवधिसम्मको तुलनामा १५।२५ प्रतिशतले घटेको हो। गत वर्षको यही अवधिमा बैंकले ३ अर्ब ४९ करोड ९३ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । चैत मसान्तसम्म आइपुग्दा बैंकको वितरण योग्य नाफा भने १ अर्ब १५ करोड ८१ लाख रुपैयाँ रहेको छ । बैंकको सञ्चालन मुनाफा ४ अर्ब १६ करोड रहेको छ भने यस वर्ष बैंकले २ खर्ब ४५ करोड रुपैयाँको निक्षेप संकलन गरेको जनाएको छ यस्तै एक खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । बैंकको प्रतिशेयर आम्दनी ४४ रुपैयाँ ९६ पैसा रहेको छ ।
एभरेष्ट बैंकको आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा बैंकको नाफा २ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रहेको छ । ४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ भन्दाबढी खुद ब्याज आम्दानी गरेको यस बैंकको वितरणयोग्य नाफा भने ९४ करोड ३५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी रहेको छ । सञ्चालन मुनाफा ३ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रहेको बैंकको हाल ८ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी चुक्तापूँजी रहेको छ । बैंकको प्रतिशेयर आम्दानी ३७।३ रुपैयाँ रहेको छ ।
सानिमा बैंकले १ अर्ब ६१ करोड ८७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खुद नाफा गरेको छ । बैंकको वितरण योग्य नाफा भने ५७ करोड ६७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । २ अर्ब २९ करोड ७७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी सञ्चालन नाफा गरेको बैंकको ८ अर्ब ८० करोड १३ लाख ८० हजार रुपैयाँ चुक्तापूँजी रहेको छ । बैंकले यस वर्ष १ खर्ब ८० करोड ६५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी निक्षेप संकलन गरेको छ भने ९२ अर्ब ११ करोड ९८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेको छ । बैंकको प्रतिशेयर आम्दानी २४।७७ रुपैयाँ र प्रतिशेयर नेटवर्थ १४४.२४ रुपैयाँ रहेको छ ।